Ukuphupha ngokubolekisa Discover ▷️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Singaboleka okanye siboleke kakhulu: imali, izinto, okanye ngamanye amaxesha izakhono. Amaxesha amaninzi sifumana izinto zethu ngokuzenzekelayo, ngamanye amaxesha kufuneka uzicele ngokucacileyo. Umzekelo, ukuba kukho into oyithathileyo kwivenkile yokuthenga imali ukuze ufumane imali, kufuneka "uyithenge kwakhona" ukuze ufumane isitampu esihambelanayo ukuyifumana.
Kuphela kwezona meko zimbi apho izinto ziye zanyamalala, zingaze ziphinde zibonwe, emva kokuba zibolekiwe. Nabani na onamava anjalo uya kucinga ngononophelo kwixesha elizayo ngaphambi kokuboleka into kwakhona.
Kodwa yintoni uphawu lwephupha "elibolekiweyo" ekufuneka lisixelele ntoni? Ingatolikwa njani xa ibonakala emaphupheni ethu?
1 Uphawu lwephupha «ukuboleka» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuboleka» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuboleka» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuboleka» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika uphawu lwephupha "ukuboleka" ikakhulu njengesalathiso Iintsilelo y Iingxaki kubomi bamaphupha. Nangona kunjalo, ukuphupha ngoku kubonisiwe njengendlela yokuphuma kwisilingo esinexesha. Ukuba umntu ophuphayo uzibona ephupheni lakhe eboleka into komnye umntu, kufuneka aqonde ukuba akanokunika nje iipropathi ezibonisa into leyo. Kungenxa yokuba ezi zinxibelelene ngokungenakuhlukaniswa. Nangona kunjalo, unokwabelana nabanye ngezakhono zakho kwaye ke ubavumele bathathe inxaxheba kubo.
Ukuba iphupha liboleka into komnye umntu ephupheni, uyaboniswa ngokutolikwa ngokubanzi kwephupha ukuba awunako okwaneleyo xanduva ngezenzo zabo. Ke ngoko, ayikabinazo ezi ndawo, ezifuziselwa yinto ebolekiweyo.
Ukuba umntu uboleka imali yamaphupha ephupheni, iba yiyo el mundo yomlindo. uncedo kwimeko enzima kunye nabahlobo bokwenene baya kukuxhasa. Ukuba uboleke imali kumtyali mali kwaye ulumkisiwe ukuba uyihlawule, kuya kufuneka uboniswe ukungaziphathi kakuhle kwakho.
Ukuba umnini-bhanki uboleka imali kwenye ibhanki ephupheni, kufuneka azikhanyisele ngephupha lokuba uya kwenza ilahleko kwihlabathi lokuvuka ngezenzo zakhe ezingagunyaziswanga. Kuya kufuneka uthathe isilumkiso sesimboli yamaphupha nzulu kwaye uphonononge ngononophelo amanyathelo akho.
Ukuboleka izinto okanye izinto kutolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha ngendlela yokuba ukuphupha kwihlabathi elivukayo kubeka umngcipheko wokuba lihlwempu ngenxa yesisa salo. Ukuba umntu ophuphayo uyala ukuboleka izinto ephupheni, kufuneka azi kule meko yamaphupha ukuba iminqweno yakhe kunye nemidla yakhe ithathelwa ingqalelo kwihlabathi elivukayo kwaye uzuze intlonipho kubahlobo bakhe.
Uphawu lwephupha «ukuboleka» - ukutolikwa kwengqondo
Icala lezengqondo lokuchazwa kwephupha lizisa uphawu lwephupha "ukuboleka" ikakhulu ngokunxulumene negama "imali." Ukuba iphupha liboleka imali komnye umntu ephupheni, kuyabonakaliswa kuye ngokwasemphefumlweni ukuba ungomnye ebomini bokuvuka. ukuzibophelela okuqinileyo ifunyenwe okanye iya kwamkelwa.
Ukuba iphupha, kwelinye icala, lifumana imali ebolekwe emntwini ephupheni, kuya kufuneka ujonge indlela obahlula ngayo oovimba bakho kwilizwe elivukayo. Kungenxa yokuba kufuneka wazi ukuba ezi azinasiphelo. Ngale miba, ngokokuchazwa kwengqondo ngephupha, kuyacetyiswa ukuba ufune uncedo ngaphandle.
Uphawu lwephupha «ukuboleka» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwimbono yokomoya, uphawu lwephupha "uboleke" luhambelana kakhulu isiqabu y uncedo ijongiwe.
Phupha malunga nokuqunjelwa